Chelsea Iyo Bayern Munich Oo Isku Wajihi Doona Finalka Koobka UEFA Champions Leagie. | Berberanews.com
Home CAYAARO Chelsea Iyo Bayern Munich Oo Isku Wajihi Doona Finalka Koobka UEFA Champions...
Chelsea Iyo Bayern Munich Oo Isku Wajihi Doona Finalka Koobka UEFA Champions Leagie.
(Berberanews Sports):- Waa final aanay jiirin cid sadaalisay. Ka dib labo habeen oo ciyaaro cajiib ah ay ka dhaceen Spain, Bayern Munich waxa ay Santiago Bernabeu kaga talaabsatay Real Madrid iyagoo finalka la cayaari doona Chelsea, kuwaasoo habeen ka hor natiijo aanay cidna filaneynin ku soo gabgabeeyay guulihii Barcelona ee Camp Nou.
Bavarians haatan waxa ay faa’ido ahaan u heystaan inuu finalka ka dhacayo garoonkooda bisha soo socota iyagoo baadigoob ugu jira koobkoodii shanaad ee Champions League. Taas bedelkeeda Chelsea waxa ay dooneysaa inay markii ugu horeysay taariikhda ay kor u qaado Champions League ka dib markii 2008dii finalkii rikoodhe looga qaaday.
Finalka xilli ciyaareedkan waxa uu balanqaadayaa in ciyaar cajiib ah ay ka dhici doonto, sababtoo ah sida ay labada kooxood ugu soo talaabsadeen labada kooxood ee ugu tunka weyn Spain.
Waxa ay xilli ciyaareedkan ku bilowdeen Champions League inay ciyaaraan kulan Play offs ah si ay u xaqiijistaan wareega Groupyada, waxaana ay 3-0 wadar ahaan soo direen FC Zurich. Isku aadkii Groupyada Bayern Munich waxa ay soo gashay Group A oo loogu magacdaray xilli ciyaareedkan Groupkii dhimashada.
Group A waxaa kula wehliyay Manchester City, Napoli iyo Villarreal, lakiin kaalin koowaad ayay kaga soo baxeen Groupkooda.
Wareegii 16ka waxaa lugtii hore ay guuldarro 1-0 ah ka soo gaadhay FC Basel, lakiin lugtii labaad oo Jarmalka ka dhacday Bayern Munich waxa ay 7-0 ku dubatay Basel, iyadoo rikoodhka gashay guushii ugu weynd ee wareega 16ka tariikhda Champions League.
Wareega 8da waxa ay isku soo aadeen kooxda Faransiiska ee Marseille, lakiin 4-0 ayay wadar ahaan labada lug kaga gudbeen iyagoo xaqiijistay booskooda semi-finalka.
Lugtii hore ee semi-finalka oo ay martigeliyeen Real Madrid iyaga ayaa ciyaar fiicnaa islamarkaana gaadhay guul 2-1 ah.
Lugtii labaad oo ka dhacday xalay Santiago Bernabeu waxa 14 daqiiqo gudahood looga naxsaday labo gool uu dhaliyay xiddiga Real Madrid Cristiano Ronaldo, lakiin gool rikoore ahaa oo uu u dhaliyay Robben ayaa ciyaarta celcelis ahaan labada lug ka dhigtay 3-3.
Rikoodhe ay isla tageen Bayern Munich ayaa 3-1 ku badisay, iyadoo Schweinsteige uu shabaqa ku hubsaday rikoodhadii u danbeysay ee u xaqiijisay booskooda finalka.
Isku aadkii wareega Groupyada Chelsea waxa ay Group E la gashay Genk, Bayer Leverkusen iyo Valencia waxaana ay ku soo baxeen kaalinta koowaad ee Groupkooda.
Wareega 16ka lugtii hore Blues waxaa looga soo naxsaday guuldarro 3-1 ah oo ka soo gaadhay Napoli, lakiin kooxda Talyaaniga markii ay booqasho ku tagtay Stamford Bridge Blues ayaa celcelis ahaan labada lug ku badisay 5-4.
Wareegii 8da Chelsea waxa ay ka talaabsatay kooxda reer Portugal ee Benfica, iyagoo xaqiijistay booskooda semi-finalka oo ay isku soo aadeen Barcelona.
Inkastoo dad badan ayaa aminsanaayeen in Chelsea aysan ka gudbi karin Barcelona, hadana iyaga ayaa guul weyn ku gaadhay Stamford Bridge markii ay 1-0 lugtii hore kaga badiyeen kooxda reer Catalans.
Lugtii labaad Chelsea waxaa looga hormaray 2 gool taasoo ka nixisay weliba iyadoo kabtankooda casaan laga siiyay qeybtii hore ee ciyaarta, lakiin goolal ay kala dhaliyeen Ramires iyo Fernando Torres ayaa Chelsea u sahashay inay wadar ahaan labada lug ku garaacaan Blaugrana 3-2 islamarkaana ay xaqiijistaan booskooda finalka.
Previous articleGanacsato China ah oo uu Hoggaaminayo Guddoomiyaha KULMIYE oo Booqasho Ku Tagay Wershadda Sharaabka Somaliland ee SBi
Next article“Nimanka Muddaharaadka ku baaqay waxaan odhan lahaa Siilaanyo-ba 70-jir ayuu 80 cod Madaxtinnimo kaga tanaasulay..”